Inkinga yezikweletu kwezomphakathi | Isolezwe
Inkinga yezikweletu kwezomphakathi
ezemisakazo / 21 May 2019, 10:53am / FANELESIBONGE BENGU
UMREPHA u-AKA evakashele iDYR lapho ayekhuluma khona noKevin Minter-Brown
NGESONTO eledlule Isolezwe libike ngokungazwakali emoyeni kweDurban Youth Radio.
Ukunqamuka kwadalwa wukuthi lesi siteshi sentsha yaseThekwini sasikweleta inhlangano eyengemele imibhoshongo yokusakaza iSentech.
Kuthiwa imali eyayikweletwa icela kuR400 000. Kodwa umphathi uMiles Zikalala uthe sebeyilungisile inkinga futhi sebezoba neyabo imibhoshongo.
Uthe inkinga yokukweleta iSentech akusiyona eyabo kuphela, ziningi iziteshi zomphakathi ezikweletayo. Zithembele eMnyangweni wezokuXhumana ukuthi uzikhokhele isikweletu.
Imithombo yabezindaba ukuze isebenze ngokukhululeka kumele ithole izikhangiso ukuze kuzongena inkece. Yingqinamba ebhekene nenqwaba yeziteshi zomphakathi ukuthi izikhangiso ziyagqoza.
Abakhangisi bakhetha iziteshi ezithathwa njengezinkulu ngethemba lokuthi baningi abazozwa ngabasuke bekukhangisa.
Iqiniso wukuthi iziteshi zomphakathi zineqhaza elikhulu ezilibambile futhi ziyalalelwa. IJozi FM nje eGoli inabalaleli abangaphezulu kuka-500 000. Izwi LoMzansi lapha eThekwini lilalelwa ngabangaphezulu kuka-142 000 okuyisibalo esingaphansi kancane kuneSAFM esakaza izwe lonke kodwa inabalaleli abangu-157 000.
Ngalokhu sekumele abakhangisi babheke ukusebenzisa iziteshi zemiphakathi ikakhulu ngoba ikhuluma ngqo nemiphakathi eyisakazelayo. Uma unesitolo KwaNongoma nje, ungakhangisa kwiNongoma FM ukuze uzokhuluma nabantu baKwaNongoma. Namanani azothi ukushibha kunokufuna ukukhangisa esiteshini esinjenge-East Coast Radio lapho kuzozwa abantu abakude nebhinisi lakho.
Ukungena kwemali esiteshini kusho ukuthi nabasakazi sebengakwazi ukuthola isibonelelo esincane ngoba akusiwona wonke umuntu ozogcina ekwemikhulu lapho ezohola kangcono khona. Izokwazi futhi ukukhokhela nezikweletu kugwemeke isimo esifana neseDYR.
Nazo iziteshi kodwa kumele zikhuthale, ithimba lezikhangiso lisebenzisane nabadidiyeli bezinhlelo. Uma umdidiyeli ehlele ukuthi ohlelweni kukhulunywe ngesihloko esithize noma isigaba, ithimba lokukhangisa aliphume liyofuna abakhangisi lisebenzisa lokho. Isibonelo nje, uma kuthiwa kunesigaba esikhuluma ngezindawo ongazivakashela KwaZulu-Natal, abezokukhangisa bangaxoxa nabezokuvakasha babe ngabaxhasi baleso sigaba.
Umdidiyeli manje akasenzi nje uhlelo ukuthi lube mnandi kodwa usethi uma ehlela uhlelo lwakhe abheke ukuthi yisiphi isigaba esingadayiseka kalula ukuze kungene inkece.